BUKA: UTrevor Noah enza ihlaya ngokuthi iDA imvotele kanjani uZuma | News24
BUKA: UTrevor Noah enza ihlaya ngokuthi iDA imvotele kanjani uZuma
Cape Town – Usomahlaya waseNingizimu Afrika uTrevor Noah ubuyile kwelakuleli njengoba ezoba nochungechunge lwemicimbi. Lo methuli wohlelo iThe Daily Show uzilungiselela imicimbi emine – emithathu eGoli kanye nowodwa eThekwini – kanti kulezi zinsuku umatasatasa nezingxoxo nabezindaba.
OLUNYE UDABA: BUKA: UZuma uzifikele ngokwakhe ePhalamende ngaphambi kwevoti ‘lokumketula’
Kwenye yezingxoxo azenze kamuva, uTrevor uhlale phansi nomngani wakhe futhi ongumethuli wohlelo emsakazweni i-947, u-Anele Mdoda, nalapho bekhulume khona ngezihloko eziningi kusukela encwadini yakhe – esahamba phambili ngokudayisa eNew York - kuya kubantu abathatha njengabangani bakhe abahle kanye nokuthi kungani kungafanele umenzele iphathi yosuku lokuzalwa abengazi ngayo.
UTrevor uthi useyabuya ezindabeni ezenzeka kuleli, wathi ukube ubeyi-DA ubezovotela ukuthi uZuma ahlale. Uthi lokhu bekuzoba “yiqhinga” elihle kakhulu.
Zibonele le ngxoxo ephelele ngezansi eyenzeke emsakazweni i-947 ngoLwesibili: